ေဗဒင္ ယၾတာ Archives - MM Daily Life
19.May.2022 မှ 25.May.2022 အထိတစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း
May 19, 2022 by MM Daily Life
19.May.2022 မှ 25.May.2022 အထိတစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ ဒီတစ်ပတ်အတွင်း သားသမီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပူပန်ရတာအလုပ်များရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါ တယ်။ ရိုးအသူများသတိထားပါ။ ကိုယ်မသိတဲ့ နယ်ပယ်က အလုပ်ကိစ္စများကို တစ်ဖက်လူပြောတိုင်းမယုံလိုက်ပါနဲ့။ ဒီအပတ်က လူလိမ်ခံရလွယ်တဲ့ကာလဖြစ်လို့ပါပဲ။ အလုပ်စီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ငွေကြေးကံအားကောင်းပြီး တော့ လုပ်ငန်းတွေချဲ့ထွင်နိုင်လိမ့်မယ်။ ပညာအား၊လူအားတွေနဲ့ကူညီမဲ့သူတွေပေါများတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး အားနည်းတဲ့ မိသားစုဝင်ငွေ၊ မိမိဝန်ထမ်းတွေကို အကူအညီပေးရတတ်ပါတယ်။ စိတ်ချမ်းသာစရာများတဲ့ကာလဖြစ် တာမို့ စိတ်လဲ ကြည်လင်ပြီးတော့ မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဝန်ထမ်းများ လက်တွဲညီညီ လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အလုပ်တိုးတတ်အောင်မြင်မဲ့ကာလပါပဲ။ လခစားဝန်ထမ်း များရာထူးတိုးခြင်း အသိအမှတ်ပြုခြင်း မျိုးခံရတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ နေကောင်းသက်သာရှိပါပြီ။ ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရသူများ တဖြည်း ဖြည်းနဲ့ လျော့ပါးသက်သာခွင့်ရပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်ရေးကံတော့ အနည်းငယ်ညံ့ဖျင်းနေတာ မျိုးတွေ့ရပါတယ်။ အချစ်ရေးကတော့ ချစ်သူကိုအချိန်မပေးနိုင်တာကြောင့် ချစ်သူရဲ့ ငြိုငြင်အပြစ်တင်ခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေး … Read more
ငွေအမြဲဝင်အောင်ဆန်စေ့လေးကိုဆောင် ငွေကိုဘယ်လိုထားမလဲငွေကိုပိုက်ဆံအိတ်အံဆွဲမီးခံသေတ္တာ စသည်မှာထားပါတယ်ဒါပေမဲထားတဲ့နည်းစံနစ်လိုပါတယ်မိမိငွေ အဝင်များဖိုအထွက်နည်းဖိုလာဘ်ကောင်းဖို့လုံခြုံစိတ်ချဖို့ ကံတက်စေဖို့အဝင်ကောင်းသလိုအထွက်လည်းကောင်းသောနည်းနဲ့သာထွက်ဖို့ဖုန်းရွှေဖုန်းရှီပညာကအခုလိုအကြံပြုပါတယ် ၁ ကရဝေးရွက်နဲ့အတူထားပါအကျိုးအနာမပါသောကရဝေးရွက်အနည်းဆုံးတစ်ရွက်နဲ့အတူထားပါငွေပွားများလာစေပါတယ် ၂ အကျိုးအနာမပါတဲ့ဆန်စေ့၂၁စေ့ကိုပလတ်စတစ်အိတ်ကလေးနဲ့ထုပ်ပြီးငွေနဲ့အတူထားပါလာဘ်ပွင့်လန်းစေတဲ့အပြင်မလိုအပ်ပဲငွေထွက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါတယ် ၃ ပင်လယ်ဆားအနည်းငယ်ကိုပလတ်စတစ်အိတ်ကလေးနဲ့ထုပ်ပြီးငွေနဲ့အတူထားပါငွေကြေးအရှုပ်အရှင်းကိစ္စကြွေးမြှီအမှုအခင်းကိစ္စများကာကွယ်ပေးပါတယ် ၄ ငွေဒင်္ဂါးဖြစ်စေငွေထည်ပစ္စည်းတစ်ခုခုနဲ့ဖြစ်စေအတူထားပါငွေကိုကာကွယ်ပေးသလိုလုံခြုံစိတ်ချရစေပါတယ် ၅ ငွေစက္ကူအသစ်တစ်ရွက်အနည်းဆုံးထားပါငွေတန်ဖိုးမြင့်လေကောင်းလေပါ ၆ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာငွေလုံးဝမရှိတဲ့ အဖြစ်မျိုးမပြုမိပါစေနဲ့ငွေကံညံ့သွားတတ်ပါတယ် ၇ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာအလွန်စုတ်ပြတ်နေတဲ့ငွေတွေကိုစက္ကူအိတ်နဲ့ဖယ်ထားပါရောမထားပါနဲ့ငွေမရှိတဲ့ဘဏ်ကတ်အဟောင်းများဘောက်ချာအဟောင်းများလိပ်စာကတ်များနဲ့ရှုပ်ထွေးမနေပါစေနဲလာဘ်တိတ်ပါတယ် ၈ အားလုံးထည့်ထားနိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်အနည်းဆုံးအမှတ်၁မှ၄အထိတစ်မျိုးတော့ငွေနဲ့အတူထားရှိဖို့သင့်ပါတယ် ၉ ဝင်ငွေကောင်းငွေမြဲပြီးလာဘ်လာဘပွားများကြပါစေ၁၀တားရော့ကတ်အနေနဲ့နံပါတ်၁၇The Starကိုအဆောင်အဖြစ်ထည့်ထားနိုင်ပါတယ် credit Zawgyi ေငြအၿမဲဝင္ေအာင္ဆန္ေစ့ေလးကိုေဆာင္ ေငြကိုဘယ္လိုထားမလဲေငြကိုပိုက္ဆံအိတ္အံဆြဲမီးခံေသတၱာ စသည္မွာထားပါတယ္ဒါေပမဲထားတဲ့နည္းစံနစ္လိုပါတယ္မိမိေငြ အဝင္မ်ားဖိုအထြက္နည္းဖိုလာဘ္ေကာင္းဖို႔လုံၿခဳံစိတ္ခ်ဖို႔ ကံတက္ေစဖို႔အဝင္ေကာင္းသလိုအထြက္လည္းေကာင္းေသာနည္းနဲ႔သာထြက္ဖို႔ဖုန္းေ႐ႊဖုန္းရွီပညာကအခုလိုအႀကံျပဳပါတယ္ ၁ ကရေဝး႐ြက္နဲ႔အတူထားပါအက်ိဳးအနာမပါေသာကရေဝး႐ြက္အနည္းဆုံးတစ္႐ြက္နဲ႔အတူထားပါေငြပြားမ်ားလာေစပါတယ္ ၂ အက်ိဳးအနာမပါတဲ့ဆန္ေစ့၂၁ေစ့ကိုပလတ္စတစ္အိတ္ကေလးနဲ႔ထုပ္ၿပီးေငြနဲ႔အတူထားပါလာဘ္ပြင့္လန္းေစတဲ့အျပင္မလိုအပ္ပဲေငြထြက္ျခင္းကိုကာကြယ္ေပးပါတယ္ ၃ ပင္လယ္ဆားအနည္းငယ္ကိုပလတ္စတစ္အိတ္ကေလးနဲ႔ထုပ္ၿပီးေငြနဲ႔အတူထားပါေငြေၾကးအရႈပ္အရွင္းကိစၥေႂကြးျမႇီအမႈအခင္းကိစၥမ်ားကာကြယ္ေပးပါတယ္ ၄ ေငြဒဂၤါးျဖစ္ေစေငြထည္ပစၥည္းတစ္ခုခုနဲ႔ျဖစ္ေစအတူထားပါေငြကိုကာကြယ္ေပးသလိုလုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေစပါတယ္ ၅ ေငြစကၠဴအသစ္တစ္႐ြက္အနည္းဆုံးထားပါေငြတန္ဖိုးျမင့္ေလေကာင္းေလပါ ၆ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာေငြလုံးဝမရွိတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးမျပဳမိပါေစနဲ႔ေငြကံညံ့သြားတတ္ပါတယ္ ၇ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာအလြန္စုတ္ျပတ္ေနတဲ့ေငြေတြကိုစကၠဴအိတ္နဲ႔ဖယ္ထားပါေရာမထားပါနဲ႔ေငြမရွိတဲ့ဘဏ္ကတ္အေဟာင္းမ်ားေဘာက္ခ်ာအေဟာင္းမ်ားလိပ္စာကတ္မ်ားနဲ႔ရႈပ္ေထြးမေနပါေစနဲလာဘ္တိတ္ပါတယ္ ၈ အားလုံးထည့္ထားႏိုင္ရင္ေကာင္းပါတယ္အနည္းဆုံးအမွတ္၁မွ၄အထိတစ္မ်ိဳးေတာ့ေငြနဲ႔အတူထားရွိဖို႔သင့္ပါတယ္ ၉ ဝင္ေငြေကာင္းေငြၿမဲၿပီးလာဘ္လာဘပြားမ်ားၾကပါေစ၁၀တားေရာ့ကတ္အေနနဲ႔နံပါတ္၁၇The Starကိုအေဆာင္အျဖစ္ထည့္ထားႏိုင္ပါတယ္ credit
May 12, 2022 by MM Daily Life
လပြည့်ည နဲ့ ကရဝေးရွက် ပက်ပက်စက်စက် စီးပွားတက် စတင်လုပ်ဆောင်ရင်ဖယောင်းတိုင်အဖြူတစ်တိုင်ထွန်းထားပါ။ကရဝေးရွက်တစ်ရွက်ကိုရေမွှေးဖြန်းပါ။ ကရဝေးအစိုအခြောက် ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်။ အနာအဆာ အပေါက် အကျိုး မဖြစ်စေရပါ။ အဲဒီကရဝေးရွက်ပေါ်မှာ မတ်ကာပင်အနီနဲ့ မိမိနာမည် မွေးနေ့ရေးပါ။မတ်ကာပင် Marker Pen အနီပဲရပါမယ်။ ဆော့ပင် ဘောပင်အနီမရပါ။ ကရဝေးရွက် ရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာ မိမိလိုအပ်တါလိုတိုရှင်းရေးပါ။ဥပမါ ငွေများစွာဝင်ပါစေ စသည် ။ အင်္ဂလိပ်လိုရေးလည်းရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အကြွေးသိန်းတစ်ရာပြန်ရပါစေ စသည်ရေးနိုင်ပါတယ်။ ဈေးရောင်းကောင်းပါစေ လည်းရေးနိုင်ပါတယ်။စီးပွားရေး ငွေကြေးနဲပတ်သက်ပြီး မိမိ လိုအပ်နေတဲ့ဆီလျော်သင့်မြတ်ရာရေးနိုင်ပါတယ် ။ ပြီးရင် ငွေစက္ကူ ၅၀၀၀တန် ၁၀၀၀၀ တန် ၁၀၀၀ တန်၅၀၀ တန် စသည်ရရာတစ်ရွက်ရွက် နဲ့ပတ်လိုက်ပါ။ငွေစက္ကူကြားထဲရောက်ရင်ရပါပြီ။ပြီးရင် အဲဒါကို လက်နဲ့ကိုင်ထားပြီး ဒိ ဝါတပတိဂါထာသက်စေ့ ပူဇော်ပါ။ပြီးရင် အဲဒီငွေစက္ကူနဲ့ ကရဝေးရွက် … Read more
(ကြက်ဥ/အရဟံ/အကြွေးကြေအမြန်)!အကြွေးကြေချင်သူတိုင်း မဖြစ်မနေလုပ်သင့်သည့် အကောင်းဆုံး ယတြာ… !(ကြက်ဥ/အရဟံ/အကြွေးကြေအမြန်)!!အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ!(အကြွေးမြီများအမြန်ကြေပါစေ)!အမြို့မြို့အနယ်နယ်မှာရှိကြတဲ့၊ကျွန်တော့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဒီတစ်ခါမှာတော့၊အကြွေးကြေအစီအရင်လေးတစ်ခုကိုတင်ပေးချင်တယ်၊အကြွေးကြေအစီအရင်တွေများစွာရှိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီနည်းလေးကပြုလုပ်ရလွယ်ကူပြီး၊ထိရောက်တဲ့အစီအရင်လေးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့၊လိုက်ပြီးပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့တင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊ဒီအစီအရင်ကိုသိရှိပြီးသားသူရှိသလိုမသိသေးတဲ့သူတွေလဲရှိမှာပါ၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ၊ကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆွေ တို့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးတစ်စုံတစ်ရာရရှိစေရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်!!ဒီအစီအရင်ဟာ၊သူများရဲ့အကြွေးကိုတကယ်ပြန်ပေးချင် ပါသော်လည်းငွေကြေးအဆင်မပြေဖြစ်ပြီးပြန်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်၊မြန်မြန်ဆန်ဆန်ငွေကြေးအဆင်ပြေပြီး၊အကြွေးအမြန်ကြေစေမယ့်အစီအရင်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ သူများပိုက်ဆံကိုချေးပြီးပြန်မပေးချင်တဲ့သူတွေအတွက်၊အကြွေးလာမတောင်းအောင်ပြုလုပ်ရတဲ့အစီအရင်မဟုတ်ပါဘူး!လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ1.ကြွေပန်းကန်1ချပ်2.ဆန်3.ကြက်ဥအစိမ်း1လုံး4.ဆော့ပင်အပြာရောင်1ချောင်း5.ဖယောင်းတိုင်အသေး1တိုင်6.မီးချစ်1လုံးအစီအရင်ပြုလုပ်နည်း! အရင်ဆုံံးကြွေပန်းကန်1ချပ်ထဲကို၊မိမိလက်နဲ့ဆန်လက်1ဆုပ်ထည့်ပါ၊ပြီးရင်ကြက်ဥအစိမ်းတစ်လုံးရဲ့အလယ်မှာဆော့ပင်အပြာရောင်နဲ့(အရဟံ)လို့ရေးပါ၊ပြီး ရင်အဲ့ဒီကြက်ဥကို၊ဆန်ထည့်ထားတဲ့ကြွေပန်းကန်ပြားအလယ်မှာထောင်ထားပါ၊ပြီးရင်အဲ့ဒီကြက်ဥအပေါ်မှာ၊ဖယောင်းတိုင်အသေး1တိုင်မီးထွန်းပါ၊ပြီးရင် အကြွေးကြေဖို့အတွက်လေးလေးနက်နက်ဆုတောင်းပါ!!ဒီအစီအရင်ကိုကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့မနက်9:45မှာပြုလုပ်ပေးပါ၊3ရက်တိတိပြုလုပ်ရပါတယ်၊ နောက်ရက်တွေမှာတော့ဖယောင်းတိုင်မီးပဲထွန်းပေးရမှာပါ၊ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေလဲစရာမလိုပါဘူး၊မီးထွန်းတာကလည်းအဆင်ပြေတဲ့အချိန်ထွန်းလို့ရပါတယ်၊ဒီအစီအရင်ကို၊ဘုရားစင်ပေါ်တွင်ဖြစ်စေ(သို့မဟုတ်)ဘုရားစင်ရှေ့တွင်ခုံအလွတ်တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်စေ၊ပြုလုပ်စီရင်နိုင်ပါတယ်၊ ခြေရင်းပိုင်းတွေ၊နိမ့်ကျတဲ့နေရာတွေမှာတော့မလုပ်မိပါစေနဲ့၊အစီအရင်ပြုလုပ်နေစဉ်(3)ရက်အတွင်းမှာ/အမဲသား၊ဝက်သား၊လုံးဝစားလို့မရပါဘူး၊(3)ရက်ပြည့်လို့အစီအရင်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ၊ဆန်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်အားကပ်လျှုဖို့အတွက်၊ဆွမ်းထမင်းချက်ပါ၊ကြက်ဥကိုလည်းပြုတ်ပြီး၊ဆီ၊ဆား၊အချိုမှုန့်စမ်းပါ၊ပြီးရင်ထမင်းနဲ့ကြက်ဥကိုမြတ်စွာဘုရားအား၊ဆွမ်းတော်ကပ်နေကျအတိုင်းကပ်လျှပူဇော်ပါ၊ အကြွေးကြေဖို့အတွက်ထပ်မံဆုတောင်းပါ!!ဒီနေရာမှာပြောချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်၊အဲ့တာကတော့၊ဆန်ကိုလက်1ဆုပ်/ဆုပ်ယူတဲ့အခါ၊ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်ကြီးဆုပ်မယူပါနဲ့၊ခပ်ဖွဖွအနေအထားနဲ့များများလေးပါလာအောင်ဆုပ်ယူပါ၊ဒါမှ၊ဆွမ်းထမင်းချက်တဲ့အခါ၊အဆင်ပြေမှာပါ!!စာအရေးအသားမှားခဲ့ရင်နားလည်သည်းခံခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ!!နားမလည်တာရှိရင်Cmမှာဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်!! မိတ်ဆွေများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာ၊ကိုယ်ကျန်းမာနဲ့၊လိုရာဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ဝပြည့်ဝခါ၊ကပ်ကြီးသုံးပါးကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေဗျာ!အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ Credit zawgyi (ၾကက္ဥ/အရဟံ/အေႂကြးေၾကအျမန္)!အေႂကြးေၾကခ်င္သူတိုင္း မျဖစ္မေနလုပ္သင့္သည့္ အေကာင္းဆုံး ယၾတာ… !(ၾကက္ဥ/အရဟံ/အေႂကြးေၾကအျမန္)!!အားလုံးပဲမဂၤလာပါ!(အေႂကြးၿမီမ်ားအျမန္ေၾကပါေစ)!အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္မွာရွိၾကတဲ့၊ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕မိတ္ေဆြေတြကိုဒီတစ္ခါမွာေတာ့၊အေႂကြးေၾကအစီအရင္ေလးတစ္ခုကိုတင္ေပးခ်င္တယ္၊အေႂကြးေၾကအစီအရင္ေတြမ်ားစြာရွိပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ဒီနည္းေလးကျပဳလုပ္ရလြယ္ကူၿပီး၊ထိေရာက္တဲ့အစီအရင္ေလးတစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္မိတ္ေဆြတို႔အေနနဲ႔၊လိုက္ၿပီးျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္လိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႔တင္ေပးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ဒီအစီအရင္ကိုသိရွိၿပီးသားသူရွိသလိုမသိေသးတဲ့သူေတြလဲရွိမွာပါ၊ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ၊ကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႔မိတ္ေဆြ တို႔အတြက္အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္စုံတစ္ရာရရွိေစရန္အတြက္ရည္႐ြယ္ၿပီးတင္ေပးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္!!ဒီအစီအရင္ဟာ၊သူမ်ားရဲ႕အေႂကြးကိုတကယ္ျပန္ေပးခ်င္ ပါေသာ္လည္းေငြေၾကးအဆင္မေျပျဖစ္ၿပီးျပန္မေပးႏိုင္တဲ့သူေတြအတြက္၊ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေငြေၾကးအဆင္ေျပၿပီး၊အေႂကြးအျမန္ေၾကေစမယ့္အစီအရင္ေလးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္၊ သူမ်ားပိုက္ဆံကိုေခ်းၿပီးျပန္မေပးခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္၊အေႂကြးလာမေတာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ရတဲ့အစီအရင္မဟုတ္ပါဘူး!လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား1.ေႂကြပန္းကန္1ခ်ပ္2.ဆန္3.ၾကက္ဥအစိမ္း1လုံး4.ေဆာ့ပင္အျပာေရာင္1ေခ်ာင္း5.ဖေယာင္းတိုင္အေသး1တိုင္6.မီးခ်စ္1လုံးအစီအရင္ျပဳလုပ္နည္း! အရင္ဆုံံးေႂကြပန္းကန္1ခ်ပ္ထဲကို၊မိမိလက္နဲ႔ဆန္လက္1ဆုပ္ထည့္ပါ၊ၿပီးရင္ၾကက္ဥအစိမ္းတစ္လုံးရဲ႕အလယ္မွာေဆာ့ပင္အျပာေရာင္နဲ႔(အရဟံ)လို႔ေရးပါ၊ၿပီး ရင္အဲ့ဒီၾကက္ဥကို၊ဆန္ထည့္ထားတဲ့ေႂကြပန္းကန္ျပားအလယ္မွာေထာင္ထားပါ၊ၿပီးရင္အဲ့ဒီၾကက္ဥအေပၚမွာ၊ဖေယာင္းတိုင္အေသး1တိုင္မီးထြန္းပါ၊ၿပီးရင္ အေႂကြးေၾကဖို႔အတြက္ေလးေလးနက္နက္ဆုေတာင္းပါ!!ဒီအစီအရင္ကိုကိုယ့္ရဲ႕ေမြးေန႔မနက္9:45မွာျပဳလုပ္ေပးပါ၊3ရက္တိတိျပဳလုပ္ရပါတယ္၊ ေနာက္ရက္ေတြမွာေတာ့ဖေယာင္းတိုင္မီးပဲထြန္းေပးရမွာပါ၊က်န္တဲ့ပစၥည္းေတြလဲစရာမလိုပါဘူး၊မီးထြန္းတာကလည္းအဆင္ေျပတဲ့အခ်ိန္ထြန္းလို႔ရပါတယ္၊ဒီအစီအရင္ကို၊ဘုရားစင္ေပၚတြင္ျဖစ္ေစ(သို႔မဟုတ္)ဘုရားစင္ေရွ႕တြင္ခုံအလြတ္တစ္လုံးနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ျပဳလုပ္စီရင္ႏိုင္ပါတယ္၊ ေျခရင္းပိုင္းေတြ၊နိမ့္က်တဲ့ေနရာေတြမွာေတာ့မလုပ္မိပါေစနဲ႔၊အစီအရင္ျပဳလုပ္ေနစဥ္(3)ရက္အတြင္းမွာ/အမဲသား၊ဝက္သား၊လုံးဝစားလို႔မရပါဘူး၊(3)ရက္ျပည့္လို႔အစီအရင္ၿပီးဆုံးသြားတဲ့အခါ၊ဆန္ကိုျမတ္စြာဘုရားရွင္အားကပ္လွ်ဳဖို႔အတြက္၊ဆြမ္းထမင္းခ်က္ပါ၊ၾကက္ဥကိုလည္းျပဳတ္ၿပီး၊ဆီ၊ဆား၊အခ်ိဳမႈန႔္စမ္းပါ၊ၿပီးရင္ထမင္းနဲ႔ၾကက္ဥကိုျမတ္စြာဘုရားအား၊ဆြမ္းေတာ္ကပ္ေနက်အတိုင္းကပ္လွ်ပူေဇာ္ပါ၊ အေႂကြးေၾကဖို႔အတြက္ထပ္မံဆုေတာင္းပါ!!ဒီေနရာမွာေျပာခ်င္တာေလးတစ္ခုရွိပါတယ္၊အဲ့တာကေတာ့၊ဆန္ကိုလက္1ဆုပ္/ဆုပ္ယူတဲ့အခါ၊က်စ္က်စ္လစ္လစ္ႀကီးဆုပ္မယူပါနဲ႔၊ခပ္ဖြဖြအေနအထားနဲ႔မ်ားမ်ားေလးပါလာေအာင္ဆုပ္ယူပါ၊ဒါမွ၊ဆြမ္းထမင္းခ်က္တဲ့အခါ၊အဆင္ေျပမွာပါ!!စာအေရးအသားမွားခဲ့ရင္နားလည္သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါ!!နားမလည္တာရွိရင္Cmမွာဝင္ေရာက္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္!! မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးစိတ္ခ်မ္းသာ၊ကိုယ္က်န္းမာနဲ႔၊လိုရာဆႏၵတစ္လုံးတစ္ဝျပည့္ဝခါ၊ကပ္ႀကီးသုံးပါးေက်ာ္လႊားႏိုင္ၾကပါေစဗ်ာ!အားလုံးပဲအဆင္ေျပၾကပါေစ Credit
12.May.2022 မှ 18.May.2022 အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း
12.May.2022 မှ 18.May.2022 အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ ဒီကာလအတွင်းသိထားရမှာအချက်က လူကြီးတွေနဲ့ အတိုက်အခံမလုပ်ကြဖို့ပါပဲ။ တော်ရုံကိစ္စလောက်နဲ့ တော့ လူကြီးသူမတွေကို ပြန်ခံပြောတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ ဒီအပတ်ထဲ လူကြီးတွေကို ကလန်ကဆန်လုပ်မိတာနဲ့ အဆိုး ဆုံးအခြေအနေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့အချက်က မိသားစုအတွင်း မပြေလည်သူများအေးချမ်းမှုတွေရ လာတတ်ပါတယ်။ အပြီးအပြတ်၊အဆုံးမသတ်တာတွေ ပြီးပြတ်ပါလိမ့်မယ်။အထစ်အငေါ့လေးတွေဖြစ်ပြီးမှ အဆင် ပြေရတတ်ပါတယ်။ ကြံစည်လိုက်တဲ့ကိစ္စတိုင်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့ ကိစ္စတိုင်း အတားအဆီးကြုံရတတ် ပါတယ်။ အဝေးရောက်ပြီး အဆက်အသွယ်မရ သူတွေနဲ့ပြန်လည်အဆက်အသွယ်ရတတ်ပါတယ်။ မလိုအပ်ဘဲ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေကို မဝယ်မိပါစေနဲ့။ ငွေကုန်ပြီး မိမိ အတွက် စိတ်တိုင်းကျဖို့ မလွယ်ဘူးလို့ကံကပြလို့ပါပဲ။ ဒါအပြင် ဒီကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ကူညီမဲ့သူတွေ ထောက်ပံ့မဲ့သူတွေ၊ ဘောနပ်၊ဘောက်ဆူးရတာမျိုးတွေကြုံရ တတ်ပါ တယ်။ စကားအမှားတွေကြောင့် ပြဿ နာအကြီးအကျယ်တတ်ရပါလိမ့်မယ်။ … Read more
ကျန်းမာရေးညံ့ဖျင်းပြီး ဘုန်းကံနိမ့်နေလျှင် ကျန်းးမာရေး(အထူး) လာဘ်တိတ် ဘုန်းကံ နိမ့် နေသည်ဟု ဆို ပါ လျှင် ငွေ ဖလား သို့မဟုက် ကြေးဖလား အတွင်း တရော်ကင်ပွန်း ထည့်ပါ ၎င်းဖလား အတွင်း အောင်သပြေ ၃ ခက် ။ မာလကာ ၁ ခက်/(၃ခက်) သြဇာ ၁ ခက်( ၃ခက်) ထိုး စိုက်ထားပါ။ ဘုရားရှင် နှင့်တကွ ရဟန္တာ အရှင်များ ထွက်ရပ်ပေါက် ဆရာများထံသို့ ကပ်လှူ ၍ ဤ အောင် ဖလားအတွင်း ရှိသော မင်္ဂလာ ပန်းများအား ဆေးတော် အဖြစ်၎င်းး လာဘ်လာဘ အတွက်၎င်း မေတ္တာ ဓာတ် များ ဖြင့် ချီး … Read more
ကုန်စုံ၊ကုန်ခြောက်ဆိုင်များ ရောင်းအားကောင်းစေရန်နှင့် အခြားယတြာ (၁၀)မျိုး…(လိုအပ်လျှင် သုံးနိုင်ရန်)
ကိုယ်လိုတဲ့အခါ အသုံးပြုလို့ ရအောင် Share ထားလိုက်ပါ။ 1.ကုန်စုံဆိုင်၊ကုန်ခြောက်ဆိုင်များရောင်းကောင်းစေသောယတြာမနက်တိုင် းပျဉ်းတော်သိမ် (၁၁)ညွှန့်ဖြင့်ဆိုင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကို အမြန်ရောင်းထွက်ဟုပြောပြီး (၁၀)ချက်ရိုက်ပါ။ 2.ကျန်းမာရေ းကောင်းစေရန်ဆောင်ရမည့်ယတြာရတနာတွေမှာဆိုလျှင် ကျောက်စိမ်းဟာ အသားနှင့်ထိနေရင် ကျန်းမာရေးကောင်းပါတယ် ဒါ့ကြောင့် ကျောက်စိမ်းဆောင်ပါ။ 3.သင်္ဘောသားများ သင်ဘောအမြန်တက်နိုင်ေစရန်အတွက်သင်္ဘောသီးအမှည့်တစ်လုံးကို အလျားလိုက် (၆)စိတ်စိပ်ပြီး၊ ထိုအစိတ်များကို လင်ဗန်းထဲထည့်ပါ၊ ထိုအစိတ်များပေါ်တွင် တံခွန်တစ်လက်စီစိုက်ပြီး ဘုရားမှ ာကပ်လှူပါ။ 4.(သွပ်၊သံ၊သစ်)ဆိုင်များ အရောင်းအဝယ် ကောင်းစေရန်အတွက်ဆလပ်ရွက်နဲ့(၇) ချက်တိတိ ရို်က်ပြီးရောင်းထွက်ပါစေ လို့ဆုတောင်းပါ။ 5.တစ်ခြားလူ တစ်ယောက်ကို လာဘ်ရွှ့င် စေရန်ပေးရမည့် လက်ဆောင်တလည်းသီး၊ လိမ္မော်သီး၊ လိုင်ချီးသီး၊ သစ်တော်သီး အဲ့အသီးလေးမျိုးကို လက်ဆောင်ပေးပါ။ 6. အကြွေးပြန်ရစေရေးအတွက်အိမ်ဘုရားမှာ မုန့်လုံးရေပေါ် (၁၀)လုံးကို မနက် (၁၀)နာရီမှ ာအိမ်ဘုရားမှ ာကပျလှူဆုတောငျးပါ။ 7.လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များလာဘ်ရွှင်စေရန်အတွက်မိမိရုံးကိုခရမ်းရောင်သုတ် (သို့)ခရမ်းရောင်နဲ့ … Read more
ကော်ဖီတစ်ခွက်တင် ငွေအရမ်းဝင် ၁၅ရက်တာအတွင်း လိုတရယတြာ
ကော်ဖီတစ်ခွက်တင် ငွေအရမ်းဝင် ၁၅ရက်တာအတွင်း လိုတရယတြာ ၁၅ရက်တာအတွင်းလိုတယတြာအတွင်း၇ရက်သားသမီးများစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးအခက်အအခဲများအဆင်ပြေစေခြင်းငှာအောက်ပါယတြာကိုဒါနပြုပါရစေ မိမိဘုရားကျောင်းဆောင်ရှေ့တွင်ပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်ပေါ်တွင်ငွေတစ်ထောင်တန်တစ်ရွက်တင်ပါထိုတစ်ထောင်တန်ပေါ်တွင်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်တင်ပြီးကပ်လှူပူဇော်ပါ လွယ်လွန်းလို့ ကျော်မသွားပါနဲ့မိတ်ဆွေ ထိရောက်ပြီးအစွမ်းထက်လွန်းပါတယ် ကပ်လှူစဉ်၁၅ရက်တာအတွင်းမိသားစုတွင်းငွေဝင်လာဘ်ရွှင်စီးပွားတိုး၍ အစစအရာရာအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းရပါလို၏ဟုဆုတောင်းပါဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်၇နာရီခွဲမှ၉နာရီအတွင်းပြုလုပ်ပါ။ နေ့၁၂နာရီကျော်ပါကစွန့်ပြီးလက်ဖက်ရည်ကိုမိသားစုသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ငွေတစ်ထောင်ကိညနေ၄နာရီမှ၄နာရီခွဲအတွင်းပံ့သကူပစ်ပေးပါဤယတြာကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်သာပြုလုပ်ပါရန်တစ်ခါတင်ရုံနဲ့ အကျိုးထူးစေပါတယ်ဗျာဗေဒင်ချစ်မိတ်ဆွေများ လိုအင်ဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေ ဗေဒင်နှင့်လက္ခဏာပညာရှင်ဆရာကျော် ၁၅ရက်တာအတွင်းလိုတယတြာအတွင်း၇ရက်သားသမီးများစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးအခက်အအခဲများအဆင်ပြေစေခြင်းငှာအောက်ပါယတြာကိုဒါနပြုပါရစေ မိမိဘုရားကျောင်းဆောင်ရှေ့တွင်ပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်ပေါ်တွင်ငွေတစ်ထောင်တန်တစ်ရွက်တင်ပါထိုတစ်ထောင်တန်ပေါ်တွင်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်တင်ပြီးကပ်လှူပူဇော်ပါ လွယ်လွန်းလို့ ကျော်မသွားပါနဲ့မိတ်ဆွေ ထိရောက်ပြီးအစွမ်းထက်လွန်းပါတယ် ကပ်လှူစဉ်၁၅ရက်တာအတွင်းမိသားစုတွင်းငွေဝင်လာဘ်ရွှင်စီးပွားတိုး၍ အစစအရာရာအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းရပါလို၏ဟုဆုတောင်းပါဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်၇နာရီခွဲမှ၉နာရီအတွင်းပြုလုပ်ပါ။ နေ့၁၂နာရီကျော်ပါကစွန့်ပြီးလက်ဖက်ရည်ကိုမိသားစုသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ငွေတစ်ထောင်ကိညနေ၄နာရီမှ၄နာရီခွဲအတွင်းပံ့သကူပစ်ပေးပါဤယတြာကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်သာပြုလုပ်ပါရန်တစ်ခါတင်ရုံနဲ့ အကျိုးထူးစေပါတယ်ဗျာဗေဒင်ချစ်မိတ်ဆွေများ လိုအင်ဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေ ဗေဒင်နှင့်လက္ခဏာပညာရှင်ဆရာကျော် Credit Zawgyi ေကာ္ဖီတစ္ခြက္တင္ ေငြအရမ္းဝင္ ၁၅ရက္တာအတြင္း လိုတရယၾတာ ၁၅ရက္တာအတြင္းလိုတယၾတာအတြင္း၇ရက္သားသမီးမ်ားစီးပြားေရးက်န္းမာေရးလူမႈေရးအခက္အအခဲမ်ားအဆင္ေျပေစျခင္းငွာေအာက္ပါယၾတာကိုဒါနျပဳပါရေစ မိမိဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ေရွ႕တြင္ပန္းကန္ျပားတစ္ခ်ပ္ေပၚတြင္ေငြတစ္ေထာင္တန္တစ္႐ြက္တင္ပါထိုတစ္ေထာင္တန္ေပၚတြင္လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္တင္ၿပီးကပ္လႉပူေဇာ္ပါ လြယ္လြန္းလို႔ ေက်ာ္မသြားပါနဲ႔မိတ္ေဆြ ထိေရာက္ၿပီးအစြမ္းထက္လြန္းပါတယ္ ကပ္လႉစဥ္၁၅ရက္တာအတြင္းမိသားစုတြင္းေငြဝင္လာဘ္႐ႊင္စီးပြားတိုး၍ အစစအရာရာေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းရပါလို၏ဟုဆုေတာင္းပါဗုဒၶဟူးေန႔နံနက္၇နာရီခြဲမွ၉နာရီအတြင္းျပဳလုပ္ပါ။ ေန႔၁၂နာရီေက်ာ္ပါကစြန္႔ၿပီးလက္ဖက္ရည္ကိုမိသားစုသုံးေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ေငြတစ္ေထာင္ကိညေန၄နာရီမွ၄နာရီခြဲအတြင္းပံ့သကူပစ္ေပးပါဤယၾတာကိုဗုဒၶဟူးေန႔တြင္သာျပဳလုပ္ပါရန္တစ္ခါတင္႐ုံနဲ႔ အက်ိဳးထူးေစပါတယ္ဗ်ာေဗဒင္ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ား လိုအင္ဆႏၵျပည့္ဝၾကပါေစ ေဗဒင္ႏွင့္လကၡဏာပညာရွင္ဆရာေက်ာ္ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္တင္ ေငြအရမ္းဝင္ ၁၅ရက္တာအတြင္း လိုတရယၾတာ ၁၅ရက္တာအတြင္းလိုတယၾတာအတြင္း၇ရက္သားသမီးမ်ားစီးပြားေရးက်န္းမာေရးလူမႈေရးအခက္အအခဲမ်ားအဆင္ေျပေစျခင္းငွာေအာက္ပါယၾတာကိုဒါနျပဳပါရေစ မိမိဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ေရွ႕တြင္ပန္းကန္ျပားတစ္ခ်ပ္ေပၚတြင္ေငြတစ္ေထာင္တန္တစ္႐ြက္တင္ပါထိုတစ္ေထာင္တန္ေပၚတြင္လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္တင္ၿပီးကပ္လႉပူေဇာ္ပါ လြယ္လြန္းလို႔ ေက်ာ္မသြားပါနဲ႔မိတ္ေဆြ ထိေရာက္ၿပီးအစြမ္းထက္လြန္းပါတယ္ ကပ္လႉစဥ္၁၅ရက္တာအတြင္းမိသားစုတြင္းေငြဝင္လာဘ္႐ႊင္စီးပြားတိုး၍ အစစအရာရာေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းရပါလို၏ဟုဆုေတာင္းပါဗုဒၶဟူးေန႔နံနက္၇နာရီခြဲမွ၉နာရီအတြင္းျပဳလုပ္ပါ။ ေန႔၁၂နာရီေက်ာ္ပါကစြန္႔ၿပီးလက္ဖက္ရည္ကိုမိသားစုသုံးေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ေငြတစ္ေထာင္ကိညေန၄နာရီမွ၄နာရီခြဲအတြင္းပံ့သကူပစ္ေပးပါဤယၾတာကိုဗုဒၶဟူးေန႔တြင္သာျပဳလုပ္ပါရန္တစ္ခါတင္႐ုံနဲ႔ … Read more
သိသိသာသာ ဈေးရောင်းလို့ကောင်းစေသော ယတြာလုပ်နည်း
May 7, 2022 by MM Daily Life
သိသိသာသာ ဈေးရောင်းလို့ကောင်းစေသော ယတြာလုပ်နည်း ဈေးဆိုင်များအရောင်းဝယ်အထူးရွှင်ရန်အလွန်အစွမ်းထက်သောနည်း ဖန်ခွက်အကြည်၁လုံးထဲရေတဝက်ကျော်ခန့်ထည့်ပြီး အနာကင်းသောသံပရာသီးအဝါ ၁လုံးအားယာဖက်လက်ဖြင့်ကိုင်ကာ ရှင်သီဝလိဂါထာတော်၁၁ကြိမ်ရွတ်ကာဖန်ခွက်ထဲထည့်လိုက်ပါ ဆိုင်အမြင့်တနေရာလူမြင်နိင်သောသင့်တော်ရာနေရာတွင်ထားပါ မှတ်ချက်သံပရာသီးသည်ရေပေါမပေါဘဲရေအောက်ရောက်ပါက မအောင်မြင်ပါ ထိုသံပရာသီးအားသစ်ပင်တပင်အောက်ပြစ်ပြီးရေနင့်ခွက်အားအသစ်ပြုစရာမလိုဘဲ အခြားသံပရာသီး၁လုံးဖြင့်ရှင်သီဝလိဂါထာ၁၁ကြိမ်ရွတ်ပြီးထည့်ပါ… ရှင်သီဝလိဂါထာတော် (၁)သီဝလိစမဟာနာမံ၊သဗ္ဗလာဘံဘဝိဿတိ။ထေရဿအာနုဘာဝေန၊သဗ္ဗေဟောန္တု ပိယံမမ။ (၂)သီဝလိစမဟာဝီရော၊ယေယေပဿန္တုမံပိယံတေတေပဿန္တုပရမံ၊ဇနပဒါပူဇယန္တု။ (၃)သီဝလိနာမထေရေန၊မမသီသေဌပေတွာန၊ဇမ္ဗူဒီပမန္ဓလေန၊ဇယောမန္တာသုခါဝဟံ။ (၄)သီဝလိစမဟာနာမံ၊ဣန္ဒာဒေဝါသဗြဟ္မကာ။မနုဿပုရိသောဣတ္ထိ၊မဟာလာဘံဘဝိဿတိ။ (၅)သီဝလိစမဟာလာဘံ၊နာနာဒေဟိဝရံဝရံ။ဣဒမ္ပိပူဇာတံဒေတိ၊မဟာသုခံဘဝိဿတိ။ (၆)ဝဏ္ဏံဒန္တံသုခံ ကိတ္တိ၊အနာမယံဘဝေဘဝေ။ဒေဝဓိတာ၊သဗ္ဗကောဓံဝိနဿန္တု။ (၇)သီဝလိစမဟာလာဘံ၊သဗ္ဗလာဘံဘဝိဿတိ။ထေရဿအာနုဘာဝေန၊သဒါဟောတုပိယံမမ။ (၈)သီဝလိစမဟာထေရော၊ယေယေပဿန္တုမံပိယံ။တေတေပဿန္တုမံပိယံ၊ဇနပ္ပဒံပူဇယန္တု (၉)သီဝလိစမဟာထေရောမမသီသေဌပေတွာနမန္တိတေဇဇယောမန္တံ၊အဟံဝန္ဒာမိသဗ္ဗဒါ။ (၁၀)သီဝလိစမဟာထေရော၊ဒေဝမနုဿပူဇိတော၊သောရဟောပစ္စယာဒီနံ၊မဟာလာဘံကရောတုမေ။ ဈေးဆိုင်များအရောင်းဝယ်အထူးရွှင်ရန်အလွန်အစွမ်းထက်သောနည်းဖန်ခွက်အကြည်၁လုံးထဲရေ တဝက်ကျော်ခန့်ထည့်ပြီး အနာကင်းသောသံပရာသီးအဝါ၁လုံးအားယာဖက်လက်ဖြင့်ကိုင်ကာ ရှင်သီဝလိ ဂါထာတော်၁၁ကြိမ်ရွတ်ကာဖန်ခွက်ထဲထည့်လိုက်ပါ ဆိုင်အမြင့်တနေရာလူမြင်နိင်သောသင့်တော်ရာနေရာတွင်ထားပါ မှတ်ချက်သံပရာသီးသည်ရေပေါမပေါဘဲရေအောက်ရောက်ပါကမအောင်မြင်ပါထိုသံပရာသီးအား သစ်ပင်တပင်အောက်ပြစ်ပြီးရေနင့်ခွက်အားအသစ်ပြုစရာမလိုဘဲ အခြားသံပရာသီး၁လုံးဖြင့်ရှင်သီဝလိ ဂါထာ၁၁ကြိမ်ရွတ်ပြီးထည့်ပါ ရေပေါ်မပေါ်မချင်းသံပရာသီးအသစ်ဖြင့်ဂါထာအား၁၁ကြိမ်ရွတ်ပြီးပြုလုပ်ပါ မိမိကံအနေထားကိုလက်တွေ့သိနိင်ပါသည် အချို့သည်သံပရာသီး၈ လုံးမြောက်တွင်ရေပေါ်ပေါ်ပါသည် အချို့ သည်စပြူလုပ်သော ၁လုံးထဲဖြင့်ရေပေါ်ပေါ်ပါသည်အချို့သည်အလုံးရေများစွာပြုလုပ်ပြီးမှရေပေါ်ပေါ်ပါသည်၁နေ့၁၁လုံးထက်ပိုမလုပ်ရပါ ၁၁ လုံးပြူလုပ်သောလည်းရေပေါ်မပေါ် ပါကနောက်နေ့မှပြုလုပ်ပါရန်။ သီဝလိစမဟာထေရောဒေဝ မနုဿပူဇိတောသောရဟောပစ္စယာဒိနံမဟာလာဘံကာရောတုမေ ။ ”ထိုဂါထာအားဖယောင်းတိုင်အခြေမှစ၍အချွန်တစ်ခုခုဖြင့်ရေးပါ။သန့် သောအချွန်ဖြစ်ပါစေ။ အချွန်ကိုလည်း သနချေသိဒ္ဓိတင်ဂုဏ်တော်ရွတ်ပါ။ သနချေရန်ဥုံ သနသနမဟာသန … Read more